Maria Ferm oo sheegtay in uu diyaaryahay mooshinkii baarlamaanka la hordhigi lahaa | Somaliska
Maria Ferm oo sheegtay in uu diyaaryahay mooshinkii baarlamaanka la hordhigi lahaa
Gabadha u qaabilsan xisbiga Miljöpartiet arimaha socdaalka ayaa isbuucyadii la soo dhafay waxay ku guda jirtay kulamo badan oo ay la yeelaneyso Soomaalida ku dhaqan Sweden iyadoo safaradeeda ku tagtay Göteborg, Eskilstuna, Gävle, Uddevalla iyo lugtii ugu dambeysay oo ay ku booqatay reer Växjo.
Växjö oo ay Maria kulan kula qaadatay Soomaali gaareysa ilaa 50-meeyo ayay balan qaaday in ka bilaabata bisha July ee sanadka 2012 ay suurto gal noqon doonto in qofku aqoonsigiisa ku cadeeyo dhiiga DNA. Maria ayaa cadeysay in hada uu diyaaryahay mooshinkii la hordhigi lahaa baarlamaanka balse aysan wali iyaga iyo dowlada isla meeldhigin qeybihiisa kala duwan. Sidaa darteed ayay kulamo la qaadaneysaa Soomaalida Sweden si ay u ururiso macluumaad iyo waxna uga ogaato dhibaatooyinka jira.
Maria waxay sheegtay in ilaa hada uu socdo wada hadal ku saabsan sida laga yeelayo caruurta da’dooda ay buuxisay 18 sano. Mar ay ka jawaabeysay su’aal la xiriirtaan arintaas ayay tiri.
“Waxay u badantahay in ay imaanayaan. Iyaga qaladka ma leh in badalaada sharciga Sweden ay tahay mid gaabisa” ayay tiri Maria Ferm.
Soomaalida ku nool Växjö ayaa aad u soo dhaweysay booqashada ay ku timid Maria magaaladooda iyo in ay helaan siyaasi hadalkooda dhageysanaya. Maria ayaa dhinaceeda sheegtay in ay wax badan ka faaiday dhageysiga xaaladaha dadka isla markaana ay dib u qaadeyso dhibaatooyinka haysta.
WD: Abdinoor Mohamed, Småland For Somalia.
Cunsuriyada ayaa sabab u ah shaqo la’aanta haysata soo galootiga Sweden
Muslimiinta Sweden oo taageeray Yuhuuda
moh aweys says:
December 15, 2011 at 14:16
asc dhmaan baahda somliska waad ku mahadsan tihiin soo gudbinta xog iyo arimaha somlida quseeyo iyo soo galootiga
waa arin lagu farxo in xoog runta ah
arinta markaas wey fududaan doontaa
illaahse ha fududeeyo insha,allaah
bahal hoose says:
December 15, 2011 at 16:50
asc bahda somaliska iyo soomaalida oo dhan marka hore waa arin lagu farxo marka waxaan ilaahey kabaryayaa wixi qeer kujiro ilaahey anaga iyo inta muslin hanawaafajiyo aamiin insha allaah
December 15, 2011 at 18:56
issha allah illah wax kheer qabo hana siiyo neh
December 15, 2011 at 20:56
waan salaamayaa bahda somaliska.com iyo dhamaan soomalida kale oo dhan (warbixintaan uu soo gudbiyey somaliska.com waa wax aad loogu farxo mana xuma rajadu si ay iclaamisay maria, marka insha allaahu ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu ilaahay gaaladaan inooka soo qaado Aamiin), Hadda waxa la horgeynayaa baarlamanka iyagana waxaan ka rajeynaynaa inay wax kasta inoo fududeeyaan oo ilaahay inooka soo qaado.mahadsanid.
saciid cali says:
December 15, 2011 at 20:59
Asc waxaan idiin weydiinaa goormaa mooshinka la horgeynaa baarlamaanka sweden
walal jimcaale waxan ku weydinayaa waa maxay mooshinka diyaarsan ee la horkeeni doono marlamaanka ? mahadsanid
craxaman rooble says:
December 16, 2011 at 01:03
sxb jicaale waa ku slm teeda kaale goorme barlamnaka la geyna moshinka jwb sxb
December 16, 2011 at 01:12
Jimcaale walal mooshinka barlamanka kormee la hor dhigaa ee tiri maria ferm tariikh cayiman majirto miyaa?
tan kale waxee isku afgaranayan dowlada iyo xisbiga maria ferm wa maxay? mahad sanid JIMCAALE walalkey
waxan salaamayaa somalida meel kasta oo ay jogaan, Dadka sweden ku nool sida ay sheegayaan waxaa mooshinka la horgeynayaa baarlamaanka sweden bisha (sadexaad) laakiinse saaxiibkeen jimcaale ayaa waxa uu ka ogyahay inooku daraaya, Hadiise uusan jimcaale warbixin badan uusan ka hayn waxaad niyada u sheegtaan in ay rajadu fiican tahay,ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in uu sidii khayr ku jiro inuu fududeeyo. mahadsanid, tack.
December 16, 2011 at 09:18
jimco wanaagsan somali weyn JIMCAAALE MAXA NOOGU JAWAABI LADAHAY
December 16, 2011 at 14:59
sxb jimcale ma dadka u jawabtit he
December 16, 2011 at 15:20
Waan ka xumahay, xoogaa waa la mashquulay.
1. Mooshinka diyaarsan waa midkii baarlamaanka la horgeyn lahaa, balse ka hor inta aan taas la sameyn waa in wada tashi lala sameeyo haydaha ay quseyso.
2. Dowlada iyo xisbiga MP waxay ku heshiiyeen in soomaalida la keeno, waxaa wali wadahadal ka socdaa qaabkii sharciga wax looga badali lahaa iyo sidii loo wajihi lahaa dhibaatoyinka jira.
3. Mooshinka waxaa la doonayaa in baarlamaanka la hor keeno ka dambeyso Maarso oo la ansixiyo.
4. Wali waxaa jira waxyaabo aysan isla meel dhigin dowlada iyo xisbiga MP.
waad salaaman tahiin dhamaan soomalida iyo somaliska.com. (Jimcaale sxb aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaadana waanu fahanay) insha allaahu wey inoo hagaageysaa maalintii ilaahay qadorana waan dhamaanaysa.
Rajada xagga dowlada iyo xisbiga MP laga qabona wuu wacan yahay.
waad mahadsan tahay jimcaale mar labaad.
December 17, 2011 at 20:21
thnks walal qaali
December 18, 2011 at 13:00
waxaan salaamayaa saaxiibkay jimcaale waxana aan weydiinayaa shalay oo sabti ahayd 17-12-2011 waxaan maqlay sweden stockholm mudaharaad aya ka dhacay waxana aan ka dhegaystay BBCsomali.com marka maxaad wax war ka haysaa mudaharaadkaas dhacay, wad mahadsan tahay jimcaale (tack).
Marabno in la ogalado iswedhan maxaa yelay wadankeni ayaa ficnaday soo laabta dhaman wadanka idin bahan by
dhamaan waan idin salaamayaaa… Salaan ka dib walaal waxaan idin waydiiyey gaar ahaan jimcaale maxaa laga yeelayaa dadka is qaba ee aan wali caruurta isku dhalin waa hadaad wax ka og tahay?? Waanad mahad san tihiin….